शनिबार थ्री एसले आयोजना गर्यो नि:शुल्क कार्यशाला, आइतबारबाट स:शुल्क तालिमपनि आयोजना हुँदै !
ARCHIVE, COVER STORY » शनिबार थ्री एसले आयोजना गर्यो नि:शुल्क कार्यशाला, आइतबारबाट स:शुल्क तालिमपनि आयोजना हुँदै !
काठमाडौँ - थ्री एस इन्भेस्टमेण्ट नयाँ ठिमीले एक दिने नि: शुल्क कार्यक्रम सन्चालन गरेको छ । कार्यक्रममा वर्तमान बजारको अवस्थाको बारेमा दिलिप मुननकर्मी र ज्योति दाहालले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । विहान ११ बजेबाट सुरु भइ बजेसम्म सन्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा उल्लेखनीय सहभागीहरुको उपस्थिति थियो । अर्थसरोकार डटकम मिडिया पार्टनर र धितोपत्र डटकमले प्राविधिक सहयोगी रहेको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले काय्रक्रम निकै नै लावादायक रहेको बताएका थिए ।
यस्तै थ्री एसले आइतबारबाट एउटा स:शुल्क तालिम सन्चालन गर्दै छ । शेयर बजार बुज्दै नबुजेका र शेयर बजारका नवप्रवेशीलाई लक्षित गरि यो तालिम सन्चालन गर्दै आएका छौ । तालिम दुई दिन सन्चालन हुने छ ,बेलुका ४ बजे देखि ६ बजे सम्म र शुल्क १००० तय गरिएको आयोजकले बताएको छ ।